राष्ट्रपतिलाई दीपक, केदार र जितुको झटारो ! « Ramailo छ
राष्ट्रपतिलाई दीपक, केदार र जितुको झटारो !
प्रकाशित मिति : Nov 21, 2018
समय : 1:52 pm
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लागि १८ करोडको गाडी माग भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र व्यंग्य भैरहेको छ । उनको १८ करोडको गाडीको माग भएपछि कलाकारहरु पनि चुप लागेर बस्न सकेनन । हाँस्यव्यांग्य कलाकारले सामाजिक सञ्जालमा कडा व्यांग्य प्रहार गरिरहेका छन् ।
दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे र जितु नेपालले फेसबुकमा राष्ट्रपतिलाई माग गरिएको १८ करोडको गाडीको दह्रै व्यांग्य हानेका छन् । निर्देशक दिपाश्री निरौलाको गाडी अगाडि उझिएको फोटो हाल्दै दिपकराज लेख्छन्, ‘केहि महिलाहरू साह्रै जिद्दी हुँदैछन् आजकल । उहाँलाई पनि यो गाडि नभै भएन रे !’
त्यसैगरी केदार घिमिरेले ‘घरमा सबैलाई पुग्ने चामल नै छैन भने महंगो कसौंडी किन किन्ने ? ३ बिलासी गाडी’ भनेर आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।
जितु नेपालले पनि फेसबुक मार्फत नै राष्ट्रपति र सरकारलाई समेत झटारो हानेका छन् । उनले लेखका छन्, ‘१८ करोडमा दुई चार करोड थपे त हेलिकप्टर नै आउथ्यो नि । सडक जाम पनि नहुने, यत्ति कुरा पनि मैले सम्झाउन पर्ने ! कठै कति सिधा सरकार !’